» कोरोना महामारी तर पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर सोचे भन्दा राम्रो, कसरी ?
कोरोना महामारी तर पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर सोचे भन्दा राम्रो, कसरी ?
पाकिस्तानी नागरिकको प्रति व्यक्ति आय १३६१ बाट बढेर १५४१ डलर पुगेको छ ।
२०७८ जेष्ठ ९, आईतवार ०९:५३
काठमाडौं । कोरोनाको महामारीका बीच पाकिस्तानले सोच भन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ । पाकिस्तानले कोरोना र लकडाउनका बावजुद यस वर्ष ३.९४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको हो । पाकिस्तानी पत्रिका एक्सप्रेसका अनुसार शुक्रबार नेशनल अकाउन्ट्स कमेटीले चालु आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धिदर ३.९४ प्रतिशत रहने दावी सार्वजनिक गरेको हो ।
यद्यपी पाकिस्तान सरकार र अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुको अनुमान भन्दा यो आर्थिक वृद्धिदर निकै बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर ०.४७ प्रतिशत थियो । पाकिस्तान सरकारले यस वर्ष भने देशको आर्थिक वृद्धिदर २.१ हुने अनुमान गरेको थियो । आइएमएफले २.० प्रतिशत र विश्व बैंकले १.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर मात्रै हासिल हुने बताएको थियो ।
अपेक्षा भन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले कोरोना महामारीका बीच आश्चर्यजनक आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनु आफ्नो सरकारको सहित आर्थिक नीतिहरुको परिणाम भएको दावी गरेका छन् । पाकिस्तानका योजना मन्त्री असद उमरले कोरोना महामारीका बीच ३.९४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनु इमरान खान सरकोको ठूलो सफलता भएको बताएका छन् ।
आर्थिक वृद्धिदर सुधार भएसँगै पाकिस्तानको प्रति व्यक्ति आय पनि १ एक हजार ३ सय ६१ डलरबाट बढेर एक हजार ५ सय ४१ डलर पुगेको छ । विपक्षीहरुले इमरान खान सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको भन्दै व्यापक आलोचना गरिरहेका बेला सार्वजनिक भएको तथ्यांकले सरकारलाई राहत दिएको छ । यद्यपी खान सरकारमाथि विपपक्षीहरुको आरोप भने जारी नै छ । पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बिलावल भुट्टोले इमरान खान सरकारले पूर्व सरकारका योजनाहरुलाई आफ्नो सफलता बताउने बाहेक केहि काम नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
आर्थिक वृद्धिदर बढेको प्रचार गराईरहेका खानले नागरिक प्रति कुनै ध्यान नदिएको आरोप पनि भुट्टोले लगाएका छन् । भुट्टाले नागरिकको क्रयशक्तिमा निरन्तर ह्रास आईरहेको दावी गरेका छन् ।
चिन–पाकिस्तान सम्बन्ध ७० वर्षमा
पाकिस्तान र चिनको सम्बन्ध ७० वर्ष पुरा भएको छ । शुक्रबार यहि अवसरमा केहि महत्वपूर्ण कार्यक्रम पनि भए । पाकिस्तानी पत्रिका जंगका अनुसार इमरान खानले चिनको सहयोगमा निर्माण हुने ११ सय मेगावाट क्षमताको कराँची न्युक्लियर प्लान्ट(के–२)को उद्घाटन गरेका छन् ।
उनले देशमा भ्रष्टाचार उन्मुलनका लागि पनि सरकार कठोर भएर लागि परेको बताएका छन् । खानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चिनियाँ मोडलको चर्चा पनि गरेका थिए । चिनले मन्त्रिस्तरका ४२५ जनालाई चिनले भ्रष्टाचार मुद्धामा कारवाही गरेको नजिर सुनाउँदै पाकिस्तानले पनि सोही अनुसार गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए ।